तपाईंले आफू विदेशी भएको कारणले कार्यमा अनुचित व्यवहार पाउनु भएको थियो? यो गैरकानूनी हो! | COVID-19 多言語情報ポータル
नोभल कोरोनाभाइरसले तपाईंको कम्पनीलाई असफल बनाएको थियो? तपाईं विदेशी नागरिक भएका कारणले मात्र, आफ्नो जापानी सहकर्मीहरूले गरे भन्दा बढि असमान व्यवहार प्राप्त गर्नु भएको थियो? यो गैरकानूनी हो।
स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयबाट घोषणा गरे अनुसार (厚生労働省 : कौसे रोउदो शो), कम्पनी व्यवस्थापकहरूले उनीहरूको राष्ट्रियतामा ध्यान नदिइ सबै कर्मचारीहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। तपाईंलाई आफ्नो जापानी सहकर्मीहरूलाई जस्तै व्यवहार गरिने उदाहरणहरू तल छन्:
कामबाट तिनीहरू बिदा लिदाँ कम्पनीहरूले आफ्नो कर्मचारीहरूको माग गर्छ, कम्पनीहरूले विदेशी कर्मचारी साथसाथै जापानी कर्मचारीहरूलाई (छुट्टीमा हुँदा बिदाको भुक्तानी, 休業手当 : क्युगयु-टिएटि) बिदा भत्ताको भुक्तान गर्नु पर्छ।
विद्यालयहरू बन्द हुँदा र तपाईंले आफ्ना बच्चा/बालबालिकालाई हर्न बिदा लिनु पर्छ, तपाईं वार्षिक भुक्तान बिदाको लागि योग्य हुनुहुन्छ (年次有給休暇 : नेन्जी युकयु क्युका)।
सरकारी अनुदानहरूका लागि कम्पनीहरूले आवेदन दिन सक्छन् (助成金: जोसेइ-किन) जसकारण तिनीहरूले रोजगार कायम राख्न सक्छन्; तिनीहरूले जापानीको लागि मात्र नभएर विदेशी राष्ट्रयहरूको लागि पनि यस अनुदानहरूको प्रयोग बनाउन सक्छन्।
कम्पनीहरूलाई तिनीहरूको इच्छा अनुसार कर्मचारीहरू निकाल्ने अनुमति दिइएको छैन। जब उनीहरूले विदेशी नागरिकहरूको सम्झौता खारेज गर्छन्, उनीहरूले जापानी कर्मचारीहरूलाई खारेज गर्दा उनीहरूले ठ्याक्कै एउटै नियम समयमा लागू गर्नपर्छ।
तपाईंले काममा अन्यायपूर्ण व्यवहार वा कुनै पनि समस्या पाएमा, तपाईंले श्रम विभाग (労働局 : रोउदो क्योकु), श्रम मानक निरीक्षण कार्यालय (労働基準監督署 : रोउदो किजुन कानटोकु स्यो) वा तपाईं नजिकैको सार्वजनिक रोजगार सुरक्षा कार्यालय (ハローワーク : नमस्कार वर्क) लाई परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं कठिन समय मार्फत काममा जाँदा र कहाँ परामर्श लिने थाहा नहुँदा, तपाईंले श्रम विभागलाई सम्पर्क गर्नपर्छ।
तपाईंले बिदा भत्ता (छुट्टी बिदा) कसरी प्राप्त गर्ने, वार्षिक भुक्तान बिदा, छुट्टी सम्बन्धित नियमहरू र अन्य श्रम अवस्थाहरू ( उदाहरण: ज्याला, काम गर्ने समय) कसरी लिने भनी बुझन चाहेमा, तपाईंले श्रम मानक निरीक्षण कार्यालयमा परामर्श गर्नपर्छ।
तपाईं कसरी कामको खोजी र छुट्टी पछि रोजगार बिमा लाभहरू प्राप्त गर्ने भनी बुझन चाहेमा, तपाईंले सर्वसाधारण रोजगार सुरक्षा कार्यालयलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ।
श्रम विभाग वा श्रम मानक निरीक्षण कार्यालयलाई सम्पर्क गर्नु अघि, कृपया “विदेशी कामदारहरूका लागि (外国人労働者向け相談ダイヤル : गाइकोकुजिन रोदौस्या मुके सौदान Dial, तल दिएको जानकारीमा सम्पर्क गर्नुहोस्) टेलीफोन परामर्श सेवा” वा “ श्रम मानक सुझाव हटलाइन (労働条件相談ほっとライン : रोउदो जोकेन सौदान हटलाइन, तल दिएको जानकारीमा सम्पर्क गर्नुहोस्)” मा फोन कल गर्नुहोस्। बहुभाषीय कर्मचारीले तपाईंलाई सुन्नेछन्; तिनीहरूले तपाईंलाई कानून र नियमहरूसँग आधारित सुझाव दिन्छन्; तपाईंलाई पनि अर्को पटक कहाँ सम्पर्क गर्ने भनी थाहा हुनेछ। तपाईंलाई यो तपाईंको नजिकै कहाँ छ भनी पहिले नै थाहा भएमा, तपाईंले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो स्थानीय श्रम विभाग वा श्रम मानक निरीक्षण कार्यालयमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं नमस्कार वर्क परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने, कृपया यो लेख जाँच गर्नुहोस्। बहुभाषीय मद्दत डेस्कहरूका सम्पर्क जानकारी समावेश छन्।
विदेशी कामदारहरूका लागि टेलिफोन परामर्श सेवा
यो स्वास्थ, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयद्वारा सेटअप गरिएको बहुभाषीय मद्दत डेस्क हो। कर्मचारीले तपाईंको वरिपरिको काम गर्ने अवस्थाहरूका समस्याहरू सुन्नेछन् र तपाईंले कानून तथा नियमहरूसँग सम्बन्धित सुझाव प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ; कर्मचारीले पनि अर्को पटक सम्पर्क गर्न तपाईंको एजेन्सीहरू देखाउछन्।
कल गर्न लागु हुने शुल्कहरू; तपाईंलाई ल्यान्डलाइनबाट (कर सहित) प्रति3मिनेटको 8.5 येन र मोबाइल फोनहरूबाट (कर सहित) प्रति3मिनेटको 10 येन शुल्क लगाइनेछ।
※डिसेम्बर 29 देखि जनवरी3सम्म बन्द गरियो।
※कोरोनाभाइरसको फैलावको कारणले, सोधपुछको संख्यामा वृद्धि र सञ्चालकहरूको संख्यामा कमीद्धारा पालना भएको छ, कृपया यस सेवाको केही भाग अनुपलब्ध हुनसक्छ भनी थाहा पाउनुहोस्। तपाईं कुनै पनि संचालनमा पुग्न नसकेमा, कृपया पछि कल गर्नुहोस्।
अंग्रेजी सोमबार देखि शुक्रबारसम्म
देखि दिउँसोको 3:00 पूर्वाह्न बजेसम्म(मध्याह्न देखि 1:00 पूर्वाह्न बजेको बीचमा बन्द रहन्छ)
भियतनामी सोमबार देखि शुक्रबारसम्म 0570-001706
बर्मेली सोमबार 0570-001707
नेपाली बिहीबार 0570-001708
थाई बुधबार 0570-001712
मंगोलियन बिहीबार 0570-001718
श्रम मानक सुझाव हटलाइन
यो स्वास्थ्य श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयद्धारा निजी कम्पनीमा आउटसोर्स गरिएको बहुभाषीय मद्दत डेस्क हो। जब तपाईं श्रम विभाग पछि “विदेशी कामदारहरूका लागि टेलीफोन परामर्श सेवा” मा पुग्न सक्नुहुन्न यो खुला रहन्छ र हप्तान्त/ राष्ट्रिय बिदाहरूमा श्रम मानक निरीक्षण कामदारहरू बन्द रहन्छ।
कर्मचारीले तपाईंको समस्याहरू काम गर्ने अवस्थाहरूसँग सुन्नेछन्; तपाईंले कानून तथा नियमहरूसँग सम्बन्धित सुझाव प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ; कर्मचारीले पनि अर्को पटक सम्पर्क गर्न तपाईंको एजेन्सीहरू देखाउछन्।
※ल्यान्डलाइनहरूबाट पहुँचयोग्य र जापानमा कुनै पनि ठाँउबाट फोन गर्दा मोबाइल फोनहरूमा शुल्क लाग्दैन।
सोमबार देखि शुक्रबारसम्म:
दिउँसोको 5:00 पूर्वाह्न देखि दिउँसोको 10:00 पूर्वाह्न बजेसम्म
शनिबार, आइतबार र राष्ट्रिय बिदाहरू:
बिहान 9:00 पूर्वाह्न बजे देखि रातिको 9:00 पूर्वाह्न बजेसम्म
तपाईंले पनि प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो नजिकको श्रम विभागहरू वा श्रम मानक निरीक्षण कार्यालयहरूमा परामर्श लिन सक्नुहुन्छ।
टोकियो(東京都), कानागावा (神奈川県), साइटामा (埼玉県) र चिबा (千葉県) मा, केही श्रम विभागहरूले बहुभाषीय परामर्श सेवाहरूको प्रस्ताव गरेका छन्।
5/11 मा अद्यावधिक: भाषाहरू सहायता गरियो र खुल्ला रहने समय संशोधित गरियो।
यो फोन नम्बरहरू सिधा ”विदेशी कामदारहरुको परामर्श डेस्क” मा जान्छ।
तल दिएको लिङ्कहरूमा क्लिक गर्नाले, तपाईंले Google नक्सामा आफ्नो नजिकै परामर्श डेस्क कहाँ छ भनी जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
यद्यपि, कोरोना भाइसको फैलाव रोकथाम गर्नको लागि, कृपया परामर्श डेस्कहरूमा जान भन्दा अघि अपोइन्टमेन्ट बनाउन तिनीहरूलाई कल गर्नुहोस्।
टोकियो श्रम विभाग अनुसन्धान विभाग（東京労働局監督課）(भवनको 13rd तल्ला) अंग्रेजी
बिहान 10 बजे ～ दिउँसोको4बजे
（दिउँसोको 12 पूर्वाह्न बजे देखि～1 पूर्वाह्न बजेसम्म
सिनजुकु श्रम मानक निरीक्षण कार्यालय（新宿労働基準監督署）(भवनको 4th तल्ला) अंग्रेजी
कानागावा श्रम मानक निरीक्षण कार्यालय（神奈川労働局監督課）(भवनको 8th तल्ला) English
पहिलो र तेस्रो शुक्रबार
बिहान9पूर्वाह्न बजे～दिउँसोको4पूर्वाह्न बजे
(दिउँसोको 12 पूर्वाह्न बजे देखि～1 पूर्वाह्न बजेसम्म
विश्राम समय) 045-211-7351
अत्सुगि श्रम मानक निरीक्षण कार्यालय（厚木労働基準監督署）
(भवनको 5th तल्ला) स्पेनिश
बिहान 9:30 पूर्वाह्न बजे
दिउँसोको 5:00 पूर्वाह्न बजे
विश्रामको समय） 046-401-1641
साइटामा श्रम विभाग अनुसन्धान विभाग（埼玉労働局監督課）(भवनको 15th तल्ला) अंग्रेजी
बिहान9पूर्वाह्न बजे
दिउँसोको 4:30 पूर्वाह्न बजे（दिउँसोको 12 पूर्वाह्न बजे देखि～1 पूर्वाह्न बजेसम्म
विश्रामको समय） 048-816-3596
चिबा श्रम विभाग अनुसन्धान विभाग（千葉労働局監督課） अंग्रेजी
दिउँसोको 5:00 पूर्वाह्न बजे（दिउँसोको 12 पूर्वाह्न बजे देखि～1 पूर्वाह्न बजेसम्म
विश्रामको समय） 043-221-2304
फुनाबास्ही श्रम मानक निरीक्षण कार्यालय（船橋労働基準監督署） चिनियाँ
कास्हीवा श्रम मानक निरीक्षण कार्यालय（柏労働基準監督署） भियतनामी
तपाईंले तल दिएका वेबसाइटहरूमा विस्तृत जानकारी जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
स्वास्थ्य, ‍श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय – कम्पनीहरूमा भएका वैदेशिक कामदारहरूका लागि स्वास्थ्य, ‍श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय – विदेशी भाषाहरूमा हटलाइन र परामर्श सेवाहरू